व्यापार – Tu Khabar Online
June 4, 2019	व्यापार 0
मेहनत, जोसजाँगर भए पैसा कमाउन उमेरले रोक्दैन। इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ। ३०-४० हजार रुपैयाँ कमाउन विदेशी भूमिमा पुग्ने युवाका लागि यहाँका एक ७५ वर्षीय वृद्ध उदाहरण बनेका छन्। पत्यार नलाग्न सक्छ ७५ वर्षीय वृद्धले खेती गरेरै वार्षिक १५ लाख कमाउँछन् भन्ने ! त्यसमा पनि झन् एउटा खुट्टाले त्यति भर पाउँदैन, लौरो …
December 14, 2018	व्यापार 0
काठमाडौँ – आज शुक्रबार सुनको मुल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हिजो प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयामा किनबेच भइरहेको छापावाला सुनको मुल्य आज कुनै परिबर्तन नभइ सोही मुल्यमा नै कायम रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैंयामा …
November 6, 2018	प्रवासी खबर, व्यापार 0
हुम्ला । हुम्लामा यसपाली स्याउ धेरै फलेको छ । स्याउ धेरै फलेपछि किसानलाई भण्डारणको चिन्ता हुन थालेको हो । नयाँ प्रविधि नभएकोले स्याउ भण्डारणमा समस्या आएको हुम्लाका किसानहरु बताउछन् । अहिले पनि उही पुरानो बोरामा प्याकिङ तथा जमिनमुनि खाल्डो खनेर स्याउ भण्डार गर्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी राख्नु पर्दा …
January 29, 2018	राष्ट्रिय, व्यापार, समाचार 0
चौतर्फी विरोध र सरकारको अनुगमनपछि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य घटाएका छन् । १५ दिनमै पाँचपटक मुल्य बढाएका उद्योगीले १० देखि २३ रुपैयाँसम्म मुल्य घटाएका हुन् । शिवम् सिमेन्टले प्रतिबोरा २३ रुपैयाँ मूल्य घटाएर आठ सय ८७ रुपैयाँ मुल्य कायम गरेको छ । यसले १५ प्रतिशत मुल्य बढाएको थियो । त्यस्तै, अम्बे सिमेन्ट …
January 26, 2018	व्यापार, समाचार 0
सिमभञ्याङ भन्ने वित्तिकै हामी मकवानपुरे तथा पर्यटनमा रुचि हुनेहरुको मनमा “आहा” क्या राम्रो स्थान भन्ने सोच मनमा आईहाल्छ । मकवानपुरको एकमात्र हिँउ पर्ने स्थान तथा सबैभन्दा उचाईमा रहेको स्थानको रुपमा रहेको सिमभञ्याङमा जाने पर्यटकहरु ठगिने गरेका छन् । प्रदेश नंबर ३ को राजधानी हेटौँडाबाट करिब २ घण्टाको यात्रम पश्चात पुग्ने …
January 20, 2018	व्यापार, समाचार 0
एक वर्षयता अन्य नाका बन्द गरी काँकरभिट्टाबाट मात्र अदुवा भित्र्याउन दिँदै आएको भारतले फेरि रोक लगाएको छ। भारत सरकारले नेपाली अदुवा सफा नगरी आएको भन्दै भित्र्याउन रोक लगाएपछि पाँच दिनदेखि निर्यात ठप्प भएको नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। भारतले नेपालको अदुवा खरिदका लागि …
January 17, 2018	व्यापार, समाचार 0
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै सरकारले मूल्य समायोजन गर्दै मूल्य बृद्धि गरेको हो । जस अनुसार निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रपैयाँ डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ३ …
घट्यो सुनचादीको भाउ यति रहेको छ आज
October 22, 2017	व्यापार 0
आज सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । कात्तिक १ गते तोलामा ५६३०० रहेको सुनको भाउ आज ३०० रुपैँयाले सस्तिएको छ । त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैँयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज सुन प्रतितोला ५६ हजार रुपैँयामा कारोवार भइरहेको छ । त्यस्तै आज नेपाली …
नेपालमै करोडपति बन्छन् भारतिय नागरिक जुन् कवाडी बटुलेर
October 22, 2017	राष्ट्रिय, व्यापार 0
पैसा कमाउने सुन्दर सपना बोकेर दैनिक करिब एक हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गइरहेका छन्। देशमा रोजगारको सम्भावना नदेखेर नेपाली युवा खाडीतर्फ हानिइरहेका बेला भारतीय नागरिक भने नेपाल आएर कवाडी संकलन गरी नेपालमै पैसा कमाएर घरजम चलाइरहेका छन्। कवाडी साट्न ल्याइएका सामग्री र साटेको कवाडीसमेत चोरबाटो भएर भारततर्फ लैजाँदा उनीहरूले …
North Korea hackers stole South Korea-US military plans to wipe out North Korea leadership: lawmaker
October 12, 2017	अन्तराष्ट्रिय, खेलकुद, तु-खबर, प्रवासी खबर, भिडियो, मनोरन्जन, विज्ञान प्रविधि, व्यापार, समाज 0
North Korean hackers stolealarge amount of classified military documents, including South Korea-US wartime operational plans to wipe out the North Korean leadership,aSouth Korean ruling party lawmaker said on Wednesday. Democratic Party representative Rhee Cheol-hee said in radio appearances on Wednesday that 235 gigabytes of military documents …